Taariikhdii Muxamed Cali Kalaay AUN (Qaybtii 1-aad) – Gool FM
Taariikhdii Muxamed Cali Kalaay AUN (Qaybtii 1-aad)
Raage June 4, 2016
(Louisville) 04 Juunyo 2016 – Yaa ka fekerayey in Baaskiil la xaday uu ahaa furaha bilowgii guulahii Halyeygii Feerka dunida caanka ka noqday ee Maxamed Cali Kalaay ? Laakiin taasi waa xaqiiq.
Sannadkii 1954-kii magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalka mareykanka ayey ahayd markii Maxamed Cali oo markaas magaciisu ahaa Cassius Marcellus Clay da’diisuna ahayd 12-jir laga xaday Baaskiil-kiisii markaas oo isaga iyo wiil saaxiibkiis ah ay ku jireen meesha lagu magcaabo Columbia Auditorium.
Markiiba wiilkii dhallinta yaraa ee Maxamed Cali kalaay waxa uu qolka jimicsiga (gym) ka helay askari magaciisu ahaa Joe Martin, markaas ayuu isaga oo caro dhallinyaranimo ka muuqato ku yiri Martin qofkii Baaskiilkayga xaday feer ayaan ku daandaamin doonaa. Mr. Martin oo muusoonaya ayaa waxa uu yiri “Marka hore feerka soo baro”. Toddobaadyo gudohood Maxamed Cali oo miisaankiisu 89-rodol ah ayaa gaarey guushiisii u horeysey ee masraxa feerka, taas oo ay ugu xigtey 27 sano oo uu ku soo dhex jirey feertanka. Xataa waagii uu yaraa wuxuu ku hamiyi jirey in uu noqdo halyeyga feerka culus.
Guulihii uu Feerka ka gaarey Dhallinyaranimadiisii.
Feeryahanka dunida magaca weyn ku lahaa alaha u naxariistee Maxamed Cali Kalaay waxaa uu ku dhashey magaalada Louisville gobolka Kentucky ee dalka mareykanka Bishii Janaayo 17,keedii Sanadkii 1942-kii waxaana uu u go’ay feertanka, kaas oo ahaa waxa keliya ee uu qaban jirey, xaqiiqadii intii uu dhawr-iyo toban-jirka ahaa weligiis ma shaqayn, laakiin waa feertami jirey, tababar feerka ahna wuu qaadan jirey. Taas oo uu kaga soo caan baxay wiilashii kale ee da’diisa ahaa. Intii uusan 18 jir gaarin waxa uu ku guulaystey 6 biladood oo ah “Kentucky Golden Gloves”, 2 biladood oo ah “National Golden Gloves”, 2 biladood oo ah “National AAU”. Dhawr bilood kaddib markii ay da’diisu gaartey 18 waxa uu ku guulaystey biladda dahabka ah ee Olimbiga “Olympic Gold Medal” waqtigaas oo ahay sannadkii 1960 tartankaasna oo lagu qabtay magaalada Roma ee dalka talyaaniga.
Markii uu Maxamed Cali Kalaay ku soo laabtay magaalada Louisville sanadkii 1960kii waxaa si xoog leh u jirey dhinaca koonfurta dalka mareykanka kala faquuqa iyo quursiga lagu haayey dadka madow ee mareykanka waxaana loo diidey in uu ka cunteeyo maqaayad ku taal magaaladaas isagoo markaas qoorta ay uga laad-laadey Billadii dahabka ahayd ee uu ku soo guulaytey.
Maxamed Cali kalaay marka uu feertameyo wuxuu ahaa mid aad u xoog badan, waxana lagu yaqaaney feer aad u heer sareeya oo uu inta uu lugaha kor ugu boodo asagoo lugaha cayaarsiinaya uu qofkii kasoo horjeedey feer ku tuurayo. Waxa kale oo uu ku soo caanbaxay in uu noqday mid had iyo jeer hadlaya oo aan hadalka kala joojinayn, taas oo markii dambe loo bixiyey ‘Bushimihii Louisville” micnahu waa magaaladi u ku dhashey ee Louisville oo hadleysa .
Soo Islaamiddii Maxamed Cali Kalaay:
Markii uu tababarka u qaadanayey si uu ula feertamo ninkii aadka looga baqi jirey ee feerka culus horyaalka u ahaa, Sonny Liston, ayaa Kalaay waxa uu la kulmay Capn Sam oo ahaa iimaam ka tirsan Nation of Islam ee masjidka magaalada Miami ee dalka mareykanka. Markaas ayuu Capn Sam waxa uu is baray Maxamed Cali Kalaay iyo Malcolm X oo ahaa afhayeenkii Nation of Islam. Malcolm iyo wiilkii dhallinta yaraa, waa Cassius Clay’e, waxay yeesheen xiriir wanaagsan, sidaas ayaa Kalaay uga mid noqday Nation of Islam.
Maxamed Cali Kalaay waxa uu feerkii Miami kaga caraysiiyey Sonny Liston, waxaana uu noqday halyeyga feerka culus sannadkii 1964. Maalintii ku xigtey feerkaas waxa uu Clay ku dhawaaqay in uu yahay xubin kamid ah Nation of Islam.
Magaca Maxamed Cali waxaa u bixiyey asaasihii Nation of Islam oo magaciisu ahaa Elijah Muhammad, kaas oo iska fogeeyey Malcolm X . Waxaana markaas Maxamed Cali loo sameeyey agaasime cusub oo ahaa wiilka Elijah oo magaciisa la oranjirey Herbert Muhammad. Halkaas ayuuna Kalaay ka sii watey in uu cinwaankiis ka difaacdo kaamarooyinka.
Walaal intaas ayaan ku hakinayaa qeybtii koowaad ee taariikhdii Maxamed Cali Kalaay la soco qeybta labaad Insha alah.
Waxaa Diyaariyey: Maxamuud Wardheere iyo Maxamed Cali.
TOOS u daawo: Germany vs Hungary - LIVE
TOOS u daawo: Austria vs Netherlands - LIVE